किन हुँदैछ भीम रावलको हारमा एमालेविरोधीको हारगुहार ? – Nepal Press
किन हुँदैछ भीम रावलको हारमा एमालेविरोधीको हारगुहार ?
२०७८ मंसिर १५ गते १५:२०
नेकपा एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै चर्चा र आमचासो बटुल्न सफल भए, डा. भीम रावल । अध्यक्षमा पराजित भएर पनि यति चर्चा र चासो बटुल्न सक्नु एक हिसाबमा उनको सफलता हो ।
यसअघि अस्थिर र लहडी नेताको उपमा पाएका रावललाई एमालेबाहेक र एमालविरोधीहरुले देवत्वकरण नै गरिरहेका छन् । केपी शर्मा ओलीसँग चुनाव लडेर ‘एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र नारायणीमा बग्न नदिएको’ भन्दै केही सञ्चारकर्मी, बुद्धिजिवी र फरक पार्टीकाले उनको ‘हाइ–हाइ’ गरिरहेका छन् । जसकारण चुनाव हार्दा पनि उनी गर्व गरिरहेका छन् ।
‘चुनाव हारे पनि रावलले मन जिते’ भन्ने गैरएमालेको सहानुभूतिले राजनीतिमा खासै अर्थ राख्दैन । किनकी एमाले कमजोर होस् भन्ने चाहनेहरुका ती सहानुभूतिले रावलको शक्ति बलियो हुन्न । महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा पराजित भन्ने बायोडाटा बनाउन सफल भए पनि रावलको अबको राजनीतिक यात्रा आवेग होइन, विवेकले चल्नुपर्छ ।
जसरी पनि चुनाव गर्नु अनि लाठीमुङ्ग्री गर्नुलाई नै लोकतन्त्र मान्नेहरु पनि छन्, त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ । कांग्रेस महाधिवेशनमा गोली चल्दासमेत लोकतन्त्र देख्ने ‘पहेँले रोग’बाट ग्रसित बौद्धिक जमात र मिडियाको एउटा तप्का एमालेमा धेरै पद सर्वसम्मत हुँदा लोकतन्त्र नारायणीमा बगेको देख्छ ।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर १५ गते १५:२०
One thought on “किन हुँदैछ भीम रावलको हारमा एमालेविरोधीको हारगुहार ?”
सहि लेख ।